Prezidaant Doonaald Traamp Diplomaatota Biyyoota Musliimaa Waliin Irbaata Ramadaanaa Qooddatan
Caamsaa 14, 2019
Prezidaant Doonaald Traamp Wixata kaleessaa galgala diplomaatotaa fi ambaasaadderoota biyyootii musliima irra jireessa irraa ta’an White Housetti simachuu dhaan ennaa baatii ramadaanaa soommanna kaleessaa hiikuuf galgala irbaata waliin qooddatanii jiran.
Traamp Ramadaanni yeroo wal gargaarsaa fi maatii fi hawaasa walitti fudu jedhan. Traamp itti dabaluu dhaan wal dadhabuu fi hookkara torbanneen dhiyoo uummata amantiiwwan adda addaa irraan dhiibbaa ka’e irra aanuun ni danda’ama jedhan.
Garaan keenya musliimota masjiida New Zealand keessatti ajjeefaman ilaalchisee gaddaan guutuu dha. Akkasumas Kiristaanota, Juushota fi ijoollee Waaqayyoo kanneen biroo kanneen Sri Lanka, Kaalifoorniyaa fi Pittsburgh keessatti ajjeefaman ni yaadanna Jedhan.
Ennaa isaan yaadannu kanatti, shorokeessummaa injifachuu akkasumas dhiibbaa amantii irra jiru dhabamsiisuuf hojjenna. Kanaanis uummati soda malee waaqeffachuu, balaan na irra ga’innaa jedhee utuu hin yaadda’in kadhannaa geggeeffachuu danda’u. Gara fuula duraatti wal galtee fi nagaan akka jiraatu waaqa haa kadhannu jedhan.